Iindaba - Icandelo lesinyithi lase China libuyela esiqhelweni
Iinkampani zaseTshayina ezinxulumene nesinyithi zihlengahlengisa amashishini abo njengoko amaxabiso ebuyela esiqhelweni, emva koqhushululu lukarhulumente kwingqikelelo yentengiso yezinto ezifuneka kakhulu kwimizi-mveliso.
Ukuphendula ukutsiba kwamaxabiso okuthatha ixesha elide kwimpahla yorhwebo enje ngentsimbi, umcwangcisi wezoqoqosho ophambili wase China ubhengeze ngolwesibini isicwangciso sokusebenza sokomeleza amaxabiso ezinto ngexesha le-14 leminyaka yesiCwangciso seMinyaka emihlanu (2021-25).
Esi sicwangciso siqaqambisa isidingo sokuphendula ngokufanelekileyo kumaxabiso anyukayo esinyithi, ubhedu, umbona kunye nezinye izinto zorhwebo.
Iqhutywa kukukhutshwa kwesicwangciso esitsha sentshukumo, ikamva le-rebar lehle ngepesenti ye-0.69 ukuya kwi-4,919 yuan ($ 767.8) ngetoni nganye ngoLwesibini. Ikamva lesinyithi lawa nge-0.05 yeepesenti yaya kwi-1,058 yuan, ibonisa ukuncipha kokungazinzi emva kokwehla okubangelwe ngurhulumente.
Isicwangciso sokusebenza ngoLwesibini siyinxalenye yeenzame zamva nje zamagosa aseTshayina zokuphinda babize into ekuthiwa kukuqikelela okugqithileyo kwiimarike zorhwebo, okukhokelela kwilahleko enkulu yempahla yorhwebo ngoMvulo, e-China nakwamanye amazwe.